6 Igodo arụmọrụ dị mkpa maka afọ ojuju ndị ahịa | Martech Zone
Ọtụtụ afọ gara aga, arụrụ m ọrụ maka ụlọ ọrụ nyochara olu oku ha na ọrụ ndị ahịa. Y’oburu na olu oku ha di elu na oge obula oku na-ebelata, ha ga eme onu ha ịga nke ọma. Nsogbu bụ na ha enweghị ihe ịga nke ọma ma ọlị. Ndị nnọchi anya ọrụ ndị ahịa na-eme ngwa ngwa kpọọ oku ọ bụla iji gbochie njikwa ha. Ihe si na ya pụta bụ ụfọdụ ndị ahịa iwe were iwe nke na-akpọghachi azụ ugboro ugboro iji chọta mkpebi.
Ọ bụrụ na ị ga-enyocha afọ ojuju ndị ahịa gị gbasara ọrụ ndị ahịa na nkwado ndị ahịa, lee usoro ihe arụ ọrụ 6 ị kwesịrị ịmalite ugbu a:
Jide Oge - Oge ndị ahịa na-ejigide. Gị ahịa ọrụ nnochite anya mkpa ịdị na-arụ ọrụ nke ọma na-ntị zara, ma ọ bụghị iji mebie ihe ahịa ha na-agwa! Oge ijide bụ ihe ngosi dị ukwuu ma ị nwere ndị nnọchi anya zuru oke iji nyere ndị ahịa gị aka.
Nkwado Isiokwu Gụọ - Inwe nnukwu ọbá akwụkwọ nke onwe gị na-arụ ọrụ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ inyere ndị ahịa aka ma debe ihe ndị otu gị chọrọ. Ajụjụ, ihe omuma-ihe, otu esi vidiyo, nkwado nyocha nwere ike… ihe niile na-enyere aka! Site na inyocha edemede ndị a gụrụ, ị ga - enweta ogo doro anya banyere njirimara isiokwu ndị ahụ ma nyochaa iji ha eme ihe n'ihe metụtara ịkpọ oku.
Nkeji edemede Oge - Ọ bụrụ na ndị na - agụ akwụkwọ achọta edemede mana ha agaghị anọ ogologo oge iji gụọ ya, ịnwere ọrụ ị ga - arụ. Ikekwe ị chọrọ karịa screenshots ma ọ bụ ndekọ na-enyere ha aka. Pụrụ ọbụna ịchọ nyochaa nkata nkwado arịrịọ na isiokwu peeji nke ma ọ bụ itinye oku nsuso ngwanrọ na nọmba dị iche iche iji kpọọ ka ị wee nyochaa arụmọrụ ọrụ.
Oge Mkpebi - Helpdesk software na CRM ma-ekwe ka ị soro support tiketi site na a mkpebi. Gbaa mbọ hụ na ndị otu gị anaghị amalite tiketi ọhụụ site na ịlele ọnụọgụ arịrịọ ọ bụla n'aka ndị ọrụ gị!
Kpọọ Mkpebi - Ihe megidere afọ ojuju ndị ahịa bụ nkụda mmụọ. Ọ bụrụ na onye ahịa ga-akpọghachi azụ ugboro ugboro tupu ị nweta ozi ha chọrọ, ị ga-achụpụ ha ma wedata ọnụego njide ndị ahịa gị.
Ọrụ afọ ojuju - Ndị ọrụ nkwado gị bụ ndụ nke nzukọ gị. Ndị ahịa na-enwetakarị oge na ndị nnọchi anya ha karịa ka ha na ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị otu isi na-eme. Nke ahụ pụtara na ha na-enwe nnukwu mmetụta maka akara gị. Iku ndị mmadụ dị ukwuu ma nyere ha aka ịchụpụ ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ gị. Nye ha ike idozi nsogbu ahụ n’enweghị mkpa ịrị elu.
Ozugbo ị nwetara metrics ndị a, ị nwere ike ịkwalite ọkaibe gị site na inyocha gị ezi ndị ahịa iji ngwakọta nke afọ ojuju ndị ahịa gị (CSAT), Net Akara Onye Nkwalite (NPS), na Ahịa Mgbalị Ndị Ahịa (CES).
Ahịa afọ ojuju bụ otu n'ime toughest, ọtụtụ nkịtị echiche weghara ma tụọ. Afọ ojuju na-adịkarị n'anya onye na-ahụ ya, ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwá ọrụ dịka nyocha, ị na-adabere na data ị na-akọ nke na-eweta nanị otu akụkụ nke akụkọ ahụ. Tụkwasị na nke a, "ihe ịga nke ọma" nwere ọtụtụ akụkụ: Onye ahịa nwere ike inwe obi ụtọ n'ozuzu ya, mana enwere ike ịnwe ụfọdụ ndị na-emebi iwu zoro ezo na-emebi ọnụọgụ njide gị. Ritika Puri, Ahịa.
Nke a bụ ihe infographic si Salesforce, Mee Ka Ha Nwee Obi :tọ: Otu esi eme ka afọ ojuju ndị ahịa gị dị na Skyrocket:
Tags: na-akpọ mkpebiCESCRMUchennacsrahịa mgbalị akaraahịa jide ogeezi ndị ahịaobi ụtọ ndị ahịaahịa afọ ojuju ndị ahịaọnụ ahịa ndị ahịa afọ ojujuahịa ọrụ metricsonye na-ahụ maka ọrụ ndị ahịaahịa nkwadoahịa nkwado isiokwuahịa nkwado metricsndị ahịa nkwado vidiyoGoogle Analyticsesi vidiyoinfographicihe ọmụmanet nkwalite akarankpndị ahịakwado olu okuoge maka mkpebi
Akwa isiokwu, Douglas! Echere m na nke a bụ ihe dị oké mkpa nyocha nke ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị iburu n'uche ma wulite ma a bịa nyochaa mmetụta ha. M ga-ekwupụtakwa na ị na-eme nyocha onye asọmpi ebe a, iji hụ otú ụlọ ọrụ gị si emegide ụdị ndị ọzọ yiri ya ma a bịa na njide ndị ahịa na afọ ojuju.